धनुषामा जब उपमेयरलाइ प्रहरीले लाठीले बजायाे …. - Nepal's Digital Newsportal
धनुषामा जब उपमेयरलाइ प्रहरीले लाठीले बजायाे ….
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पक्षधरबीच आज भएको विवाद झडपमा परिणत हुँदा स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीको लाठी चार्जबाट उपप्रमुखसहित आधा दर्जन घाइते भएका छन्।
कार्यालयसम्बन्धी भएको विवादमा प्रहरीको लाठी चार्जबाट आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय घाइते भएका छन्। आज दिउँसो प्रहरीको सहयोगमा प्रमुख रामज्ञान मण्डल पक्षका व्यक्तिले उपप्रमुख रेणु झाले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयबाट बलजफ्ती सामग्री लिन खोज्दा दुबै पक्षबीच झडप भएको थियो।
झडपका क्रममा उपप्रमुख झासहित वडा नं २ बघचौडाका अध्यक्ष उदय साह, तपेश्वर मण्डल, फेकन कापर, पुण्य खत्रीलगायत घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये मण्डलको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनको थप उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल ल्याइएको छ।
स्थानीयका अनुसार उपप्रमुखको कार्यालयबाट सामग्री लग्न प्रहरीसँगै प्रमुख मण्डल करीब ६० जनाको समूहका साथ आएका थिए। घरेलु हातहतियारसहित उनीहरु दुई वटा ट्याक्टरमा आएका थिए।
उपप्रमुख पक्षधरबाट स्थानीयले प्रतिकार गर्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप भएको हो। स्थिति तनावपूर्ण बनेकाले तारापट्टी, बेलही, धनुषाधामलगायतका प्रहरी चौकीबाट दर्जनौँको सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।